लाहुरे भने पछि हुरुक्कै हुने र ज्यानै फाल्न तयार हुने केटीहरुको लागी खुशीको खबर । - Namaste Online TV
नमस्ते अन्लाईन टिभी काठमाडौँ : हाम्रो समाजमा लाहुरे भने पनि अझै पनि हुरुक्क हुने चलन छ । सरकारी जागिर भए
टन्न पैसा आउने र सुक्खा संग जिन्दगि बित्ने र लाहुरे संग बिहे गरे पछि जिबनमा कुनै कुराको पनि आभाब नहुने बिस्वाश गरिन्छ र लाहुरे देश तथा विदेश बाट आउने भने पछि गाउँमा सुन्दरी मुख मिठ्याउँछन्, अनि आसेपासेहरु चाकडीमा हाजिर जनाउँछन् । लाहुरेका काका–काकी, मामा–माइजु, टोल छरछिमेकी हरेकको आ–आफ्नै दाउ छ, लाहुरेलाई आफ्नो बनाउने । लाहुरेलाई छोरी दिन पाउने बाबुआमाको चुरीफुरी नै बेग्लै हुन्छ । लाहुरे जस्तै रंगको होस्– कालो, गोरो वा होचो, मोटो, दुब्लो, चाहे जस्तो सुकै होस् लाहुरे हुनु नै सबैभन्दा ठूलो उत्कृष्टता हुन्छ, सुन्दरीको श्रीमान् बन्न । ‘छोरा जन्मे लाहुरे बनेस्, छोरी जन्मे लाहुरेसँग विवाह भएस्’ यही छ मुख्य आशिर्वाद, लाहुरे मोह भएकाहरुमा । तर, यही लाहुरेको भित्री पीडा कसले बुझेको छ र, आकर्षणमा सिमित लाहुरेको परिवेश, न राज्यले नै बुझेको छ, न त अरु नेपालीले नै । विश्व साम्राज्यको एक्लो मालिक बन्ने यात्रामा प्रमुख सहयात्री थिए, नेपाली युवा जनजातिहरु । अचम्म लाग्छ, विश्वलाई जित्ने बेलायतलाई जिताउने गोर्खालीहरुलाई जुन सम्झौता गरेर तत्कालीन राणा सरकारबाट नेपाली युवाहरुलाई युद्धमा होमिएको थियो, तिनै गोर्खालीहरु ३० वर्षदेखि बेलायती–गोर्खाली विभेदको आन्दोलन गरिरहनु परेको छ । वेलायती नागरिक जो सेनामा छन् या निवृत्त भए, उनीहरुले पाउने सेवा सुविधासरह सँगै, उत्तिकै काम गरेका गोर्खालीले माग राखेर तीन दशकदेखि संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।
पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत मलेसिया वा अर्जेन्टिना युद्ध, टर्कीको ग्यालिपोली यस्ता कुन युद्ध छैन, जहाँ गोर्खालीले वेलायती साम्राज्यका लागि नलडेको होस् । पाँच लाख गोर्खालीले ज्यान गुमाए, कसका लागि ? कसको आज्ञामा ? अहिले न वेलायत, न नेपाल, कोही पनि ती गोर्खालीको कुरा सुन्नै चाहँदैनन् । यिनै भूपू गोर्खालीको साझा मोर्चा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले गत सन् २०१३ देखि आमरण अनसनबाट सुरु गरेको आन्दोलन अब फेरि एकपटक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्व सम्मेलनमार्फत संसारभर आफ्नो मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छ । पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा प्राध्यापक डा युवराज संग्रौला पुनः एकपटक गोर्खालीसँग जोडेर आन्दोलनलाई विश्वव्यापी बनाउँदैछन् । हुन त हिजो आन्दोलनको सुरुवाती दिनमा वौद्धिक तहबाट उनै संग्रौलाले गोर्खालीको आन्दोलनलाई संसारभर पु¥याएका थिए । यही आउँदो नोभेम्बर ४ र ५ मा काठमाडौंमा विश्व सम्मेलन हुँदैछ ।